မြို့သစ်မြို့နယ်တွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တရားဝင်ကျွဲနွားအရှင် တင်ပို့ရောင်းချသည့် ကုမ္ပ?? - Yangon Media Group
မြို့သစ်မြို့နယ်တွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တရားဝင်ကျွဲနွားအရှင် တင်ပို့ရောင်းချသည့် ကုမ္ပ??
မကွေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇-မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မြို့သစ်မြို့နယ်တွင် ပြည် ပနိုင်ငံများသို့ တရားဝင်ကျွဲနွား အရှင်တင်ပို့ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီ သုံးခုရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း မြို့သစ် မြို့နယ် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနရုံးမှ သိရသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများမှာ ရုံးတော ကျေးရွာနှင့်ကံကြီးကျေးရွာတွင် တည်ရှိသော ဒီပါလမင်းကုမ္ပဏီ၊ ဂျူးဟန်ကုမ္ပဏီနှင့် ဆဲဗင်းဟွာကျင့် ကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဖေ ဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ ပြည်ပနိုင်ငံ များသို့ တရားဝင်ကျွဲနွားအရှင် တင်ပို့ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ယင်း ရုံးမှ သိရသည်။
တရားဝင် ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ကျွဲနွား အရှင်များ တရားမဝင်တင်ပို့နေမှု များကို ပပျောက်စေပြီး နိုင်ငံတော် အတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန် အကောက်များရရှိစေခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ တိရစ္ဆာန်ရောဂါများ ကူးစက်ပျံ့ပွား မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိကြောင်း အဆိုပါဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူထံ မှ သိရသည်။
”ကျွဲ၊ နွားတွေကို တရားဝင် ပြည်ပရောင်းတဲ့အတွက် ရသင့်ရ ထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းရတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ကျွဲ၊ နွား မွေးမြူရေးခြံတွေ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ကိုင်လာပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းစားသုံးမှု ကို မထိခိုက်ပါဘူး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုမိုတိုးတက်လာ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျေးလက်လူ မှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ¤င်းကပြောသည်။
ကျွဲနွားအရှင်များအား ပြည်ပ သို့တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ပင်လယ် ရေကြောင်းမှ သီလဝါဆိပ်ကမ်း၊ နယ်စပ်ဒေသများတွင် မူဆယ် (၁ဝ၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်နှင့် မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်တို့မှ စမ်း သပ်ကာလတစ်နှစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အခြားပင်လယ်ရေကြောင်း ထွက် ပေါက်နှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှ တင်ပို့ခွင့်ပြုနိုင်ရေး အထက် အဆင့်မှ ဆက်လက်စိစစ်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဈေးများတွင် ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေးကင်းစင်မှု ရှိ၊ မရှိ ရှောင်တခင?
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို မမှန်မကန်တိုင်ကြားသည့် အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ခ?
ထိုင်းအစိုးရထံ ဧည့်စာရင်းတိုင်ရန် ပျက်ကွက်သည့် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား အလုပ်သမား ၁ ဦး ဖမ်
မိခင်တက္ကသိုလ်ကြီးနှင့် သင်ကြားပေးခဲ့သော ဆရာ၊ ဆရာမများအား ရည်စူး၍ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၌ ဆီမီးတစ်
စည်ပင်လုပ်ငန်းများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှောင့်ယှက်နေသူများအားဖော်ထုတ်မည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဆို